२३ असार २०७९ बिहीबार Thursday, July 07, 2022
अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरण
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ धौलाकोटकी २० वर्षीया सेतु विकले गत वैशाखमा २४ महिनाको बच्चालाई ख्याउटेपन बढ्दै गएपछि नजिकैको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याइन् । शिशुमा कडा खालको कुपोषण देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार उनले स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारमा राखिन् । अस्पतालमा राखेको १ सातामै बच्चाको ज्यान गयो ।
महानगरले यसरी हटायो अव्यवस्थित तार [तस्बिरहरु]
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सडक आसपासका अव्यवस्थित र (केवल) हटाइँदैछ । महानगरका कर्मचारीले बुधबार पुतलीसडक क्षेत्रमा बिजुलीको खम्बामा लत्रिएका र सडकमा छरपस्ट तार हटाएका हुन् । अव्यस्थित विद्युतीय तारका कारण विभिन्न ठाउँमा बेला-बेलामा आगलागीका घटनासमेत हुने गरेको छ भने बटुवा र यातायातका साधन गुड्नलाई समस्या हुने गरेको छ । त्यस्ता तारका कारण सहरलाई कुरुप बनाएको छ । महानगरले सहरलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै फुटपाथ पसल पनि हटाइरहेको छ ।
जनार्दन शर्माको प्रश्‍न- म के कारण अनैतिक ?
अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर जनार्दन शर्माले आफू के कारणले अनैतिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुप्रति प्रतिप्रश्न गरे । विगत भन्दा निकै मलिन अनुहार बनाएर रोष्ट्रममा चढेका शर्माले केहीबेर चर्को स्वरमा आफू चोखो रहेको देखाउने कोसिस गरे । उनले विगतका सरकारले गरेका कामहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै अहिले आफूले गरेका काम जायज भएको भन्दै चोखिने प्रयास गरे ।
मन्त्री र सहयोगीहरूले साथ छाडेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन संकटमा
एकपछि अर्को मन्त्री र सहयोगीहरूले साथ छाडेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संकटमा परेका छन् । मंगलबारदेखि जोन्सनका मन्त्री तथा सहयोगी २७ सदस्यले राजीनामा दिइसकेका छन् । मंगलबार वित्तमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदले आधा घण्टा अन्तरमा पद छाडेको घोषणा गरेसँगै राजीनामा दिनेहरूको लहर नै चलेको छ ।
'फिल्मको अनुहार फेरियो, विषयवस्तु कमजोर'
'हामीकहाँ पुरी-तरकारी पाउँदैन ?' ‍रेस्टुरेन्ट छिर्ने बित्तिकै दीपक रौनियार र आशा मगराती नमिठो वचनसँग ठोक्किए । 'तपाइँ इन्डियन होइन ?' ‍फिल्मका लागि क्रु खोज्ने क्रममा धेरैपटक दीपकले यस्तो प्रश्नको सामना गरेका छन् । पहिलोपटक बोल्ने धेरैले सुरुमा दीपकसँग हिन्दी भाषामै बोलिदिन्छन् ।
केबलकार बिग्रँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित १ सय ३० जनाको आधा घण्टापछि उद्धार
गरिब परिवारमा थप दुई लाख २३ हजार सूचीकृत
सरकारले थप २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब सूचीमा राखेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिवारको सूचीमा सूचीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक हवाई भाडा बढ्यो, कहाँ जान कति लाग्छ ?
आन्तरिक हवाई भाडा बढेको छ । यसअघि नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएअनुसार फ्युल सरचार्ज बढेको हो । निगमले सोमबार आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १८५ रुपैयाँबाट बढाएर १९० रुपैयाँ पुऱ्याएको थियो । यसले उडानकाे अधिकतम भाडा बढ्न गएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबारदेखि नै लागू हुनेगरी फ्यूल सरचार्ज अनुमोदन गरी पठाएको छ ।
दुई वटा बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी नीति अघि सारेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाको बजेट भने रोकिदिएका छन् ।
झन्डा छोपेर संसद् भवनबाट बाहिरिए शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिएलगत्तै संसद् भवनबाट बाहिरएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउनेक्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याएको लगायतका आरोप लागेपछि उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ ।
एसियन प्यासिफक र टिम किरण ऋृत एसइइ कप थ्री बाइ थ्री बास्केटबल प्रतियोगिताको गर्ल्समा बुधबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । बसुन्धारास्थित आयोजक ऋृत एकेडेमीको कोर्टमा भएको सेमिफाइनलमा एसिया प्यासिफिकले बलर्स एकेडेमीलाई ६–४ ले पराजित गर्‍यो । अर्को सेमिफाइनलमा टिम किरणले हिमालयन गर्ल्सलाई ८–४ ले हरायो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपुरक संख्या नपुग्दा स्थगित गरिएको छ । औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेक्रममा कूल संख्याको एक तिहाइ पनि सांसदहरू उपस्थित नहुँदा प्रतिनिधसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
अखिल नेपाल भिक्षु संघले आर्थिक संकटग्रस्त मुलुक श्रीलंकालाई अत्यावश्यक औषधि सहयोग गरेको छ । काठमाडौंस्थित श्रीलंकाको राजदूतावासका अनुसार अखिल नेपाल भिक्षु संघ र यसअन्तर्गत गठित ‘ह्यान्ड्स फर श्रीलंका’ समितिले श्रीलंकाको राजदूतावासलाई २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अत्यावश्यक औषधि दान गरेको हो ।
वैशाख १ गते घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दिवस
सरकारले हरेक वर्षको वैशाख १ गतेलाई घरजग्गा लिखत रजिस्ट्रेसन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गतेलाई घरजग्गा लिखत रजिस्ट्रेसन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
निर्दोष सावित भएपछि शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ : पुन
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले मओवादीको तर्फबाट तत्काल कोही पनि अर्थमन्त्री नबन्ने बताएका छन् ।
उदयपुरमा पौडी खेल्नेक्रममा दुई बालिका बेपत्ता
स्थानीय सिसाखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बगाउँदा दुई बालिका बेपत्ता भएका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने धाप्लाङका ती बालिका बुधबार बेपत्ता भएका हुन् । त्रिनपा–१४ साउनेका पूर्ववडाध्यक्ष कुरुङ राईका अनुसार खोलालले बगाएर सुनकोसी नदीमा बेपत्ता हुने बालिकामा स्थानीय १३ वर्षीया विपना राई र अर्का १२ वर्षीया वीना राई रहेका छन् ।
परिवारका सदस्यलाई खोरभित्र बन्धक बनाउने रहर कसैलाई हुन्न । बिरामी भए पछि उपचार गराउने कर्तव्य परिवार कै हो । तर, आर्थिक दुरावस्थाका कारण उपचार गराउन नसक्दा परिवारका प्रियजनलाई खोर तथा सांग्लामा बाँधेर महिनौं दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्ने गरिएका छन् । समाजमा हुने यस्ता अवस्थाको उदाहरणका रुपमा धनकुटा र ताप्लेजुङका यी दुई पात्रलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारले ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत जिल्लाको तीन स्थानीय तहमा काम रोकिएको छ । आठ स्थानीय तहमध्ये सिद्धिचरण नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल र ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल भएकोले निर्माण गर्नु परेन ।
रोङ गाउँपालिका-४ को प्युरेको पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्दा बर्सेनि विस्थापितको संख्या थपिंदै गएको छ । पहिरोमा १३ घर विस्थापित भएका छन् । दर्जन जति घर जोखिममा छन् । २०६८ देखि सामान्य पहिरो जान थालेको हो । तर बर्सेनि पहिरो जाने क्रम बढ्दै गयो ।
परिवारका सदस्यलाई खोरभित्र बन्धक बनाउने रहर कसैलाई हुन्न । बिरामी भएपछि उपचार गराउने कर्तव्य परिवारकै हो । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा परिवारका प्रियजनलाई खोर तथा साङ्लामा बाँधेर महिनौं दिनसम्म बन्धक बनाएर राख्ने गरिएको छ । समाजमा हुने यस्ता अवस्थाको उदाहरणका रूपमा धनकुटा र ताप्लेजुङका यी दुईलाई लिन सकिन्छ ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका ४ दहिझोडा जंगल क्षेत्र नजिकै बुधबार बिहान एक किशोर अवस्थाको हात्ती मृत फेला परेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुर्गापुरदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरमा यो जंगल पर्छ ।
बलात्कृत किशोरी मृत फेला
सामूहिक बलात्कृतमा परेको भनिएकी सिरहा मल्हनियाकी एक किशोरी मृत अवस्थामा भेटिएकी छन् । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–१ मल्हनीयाकी करिब १५ वर्षीया एक किशोरीको शव मंगलबार बिहान आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्रउ पर्नेमा पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका ३ घर भई वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ मा डेरा गरी बस्ने ३४ वर्षीय नवलकिशोर साह कानु छन् । कानुले 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसा'मा विदेश पठाइदिन्छु भनी मेडिकल गर्ने बहानामा विभिन्न व्यक्तिसँग २५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म ठगी गरेको आरोप छ ।
प्रहरीले २ जना भारतीय नागरिकलाई ठूलो परिमाणमा लागूऔषध गाँजासहित पक्राउ गरेको छ ।
सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रमा जुवा खेल्ने तथा खेलाउने क्रम बढेको छ । जुवाखालबाट धमाधम जुवाडेहरू पक्राउ पर्न थालेपछि जुवा खेल्ने क्रम बढेको खुलेको हो । लालबन्दी प्रहरीले शनिबार साँझ मात्र जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ६ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयस्रोत बढाउन करको दायरा बढाउने भएको छ । हाल संकलन भइरहेको क्षेत्रबाहेक अन्यत्रबाट पनि कर उठाउन प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो । त्यसका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल थालिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको राजमार्ग विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियत ब्याजदरको ऋण लगानीमा विभिन्न खण्डमा कल्भर्ट, पुल निर्माण र सडक विस्तार भइरहेको हो ।
मधेस बाट थप
सुनापतिले दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने
सुनापति गाउँपालिकाले खनियापानीमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई ३० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग दिने भएको छ ।
भीमेश्वर नगरपालिकाको तामाकोसी क्षेत्रस्थित जरेपानीका खेतबारीमा केही वर्षअघिसम्म बथानै चरिरहेका मयूरहरू देखिन्थे । बाली खान खेतमा मयूर आउँदा स्थानीयले लखट्थे ।
वाग्मती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र यसको प्रभावकारिताको विषयमा अन्तरक्रिया गराएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले शारीरिक असक्तता भएका कारण जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसक्नेहरूलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्न थालेको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कसरत गरे पनि गठबन्धनका केन्द्रीय शीर्ष नेताले चासो नदेखाएपछि सरकार परिवर्तनको खेल अलपत्र परेको हो ।
रामेछापको सुनापति ५ खनियापानीको लुभुघाटमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १३ पुगेको छ । ९ जनाको घटनास्थलमै र ४ जनाको काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल पुर्‍याएपछि मृत्यु भएको हो ।
वाग्मती बाट थप
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पैसा असुल्ने दुई युवक पक्राउ
सवारी लाइसेन्स निकाल्नका लागि नक्कली निरोगिताको प्रमाणपत्र बनाएर पैसा असुल गर्दै आएका दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बडिगाड गाउँपालिका–१ को दगातुम्डाँडाकी जमुना श्रीशले १० रोपनी बारीमा उन्नत जातको मकै लगाएकी छन् । यो वर्ष घरमा खान पुगेर २/४ क्विन्टलसम्म जोगाउने योजना उनको छ । दगातुम्डाँडाकै गनबहादुर सुनारले ४ हलको मेलोमा मकै लगाएको बताए ।
लमजुङवासीले दिसामा पाइने जीवाणु ‘इकोली’ मिसिएको पानी उपभोग गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लाका हाल प्रयोग भइरहेकोमध्ये अधिकांश स्रोतको पानी पिउन अयोग्य रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
जिल्ला अदालत बागलुङमा लक्ष्यअनुसार चालु वर्षमा ५ सय ६४ वटा मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । तर बढीमा ४ सय वटा मुद्दा फैसला हुन पनि कठिन रहेको अदालतले जनाएको छ । मुलुकभर जिल्ला तहका हरेक अदालतमा यो समस्या छ ।
पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–३२ मजुवामा सोमबार साँझ ट्रकको ठक्करबाट तीन जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा कान्तिपुर टेलिभिजनका तनहुँ सम्वाददाता प्रताप रानासहित उनकी श्रीमति र छोरी छन् ।
गत माघ २५ मा ११ वर्षीय बालिकालाई फकाइफुल्याइ जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा धार्चे गाउँपालिका–५ माछाखोलाबाट २६ वर्षीय रितेश क्षत्री पक्राउ परे । मानसिक अपांगता भएकी बालिकालाई मिठाई र सय रुपैयाँ दिई फकाएर करणी गरेको उजुरी उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ । क्षत्री हाल गोरखा कारागारमा थुनामा छन् ।
मूल्यवृद्धिले ट्रक व्यवसाय धरापमा परेको व्यवसायीको गुनासो
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले ट्रक व्यवसाय गम्भीर स्थितिमा पुगेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले राज्यले भाडादर प्रणाली कायम नगर्नाले व्यवसाय ओरालो लागेको गुनासो गरेका हुन् ।
झाडी फाँडेर टिमुर खेती
सन्धिखर्क नगरपालिका–९ अर्घाको रातामाटा देउमाडी सामुदायिक वनका उपभोक्ता झाडी सफा गरेर टिमुर खेती गर्न कस्सिएका छन् । असार दोस्रो सातासम्म उनीहरूले चार हजार टिपुरका बिरुवा रोपिसकेका छन् ।
जगदीशपुर ताल पन्छी आरक्ष बन्ने
जगदीशपुर ताल अब पन्छी आरक्ष बन्ने भएको छ । चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पन्छी आरक्ष घोषणा गर्न लागिएको हो ।
क्षमता १७५, कैदीबन्दी २४१
राख्ने क्षमता छ । तर यहाँ अहिले ३५ जना मात्र छन् । पुरुषतर्फ १ सय ७५ जना क्षमताको भवन भए पनि २ सय ४१ जना बस्दै आएका छन् । पुरुष कैदीबन्दी राख्ने भवन २०६२ माघ १८ मा द्वन्द्वकालमा माओवादीको आक्रमणबाट क्षति भएको हो । त्यसपछि बनेका नयाँ भवनमा महिला र पुरुष कैदीबन्दीलाई राखिंदै आएको छ ।
अग्रिम हाजिर गर्ने भेरी अस्पतालका चिकित्सकलाई कारबाही सिफारिस
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन डा सुरेशकुमार नागले अग्रिम हाजिर गर्ने गरेको पाइएपछि उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
नेपालगन्ज विमानस्थलमा रहेको बुद्ध एयरको काउण्टरमा मंगलबार विद्युत सर्ट हुँदा विमानस्थल कार्यालय ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।
लुम्बिनी बाट थप
सल्यानमा अरिङगालले टोकेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । कालिमाटी गाउँपालिका ४ बस्ने ललित रानाको ७ वर्षीय छोरा देवदर्शन रानाको मृत्यु भएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमै उपचार
छत्रेस्वरी गाउँपालिकाले ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमै गएर उपचार थालेको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थासम्म जान नसक्दा उपचारबाट वञ्चित भएको भन्दै गाउँपालिकाले घरमै गएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
मुहान सुकेपछि काकाकुल खलंगा
खलंगाकी अष्टलक्ष्मी भण्डारी दैनिकजसो बिहानै खानेपानीको जोहो गर्न जुगाड खोलातिर लाग्छिन् । उनको बिहान र बेलुकाको झन्डै २ घण्टा पानीको जोहो गर्नमै बित्छ । खलंगाको सबै घरमा धारा जडान गरिएको छ । तर खानेपानी धारामा हप्ता दिनदेखि पानी नझर्दा उनलाई जुगाडखोलाको पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
कर्णालीको रातो किताबमा सुदूरपश्चिमको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ र वैतडीका लागि बजेट छुट्याएको पाइएको हो ।
द्वन्द्वपीडितका विषयमा स्विस राजदूतको चासो
नेपालका लागि स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजाबेथ वोन क्याप्लरले कर्णालीका द्वन्द्वपीडितका विषयमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा उलने द्वन्द्वपीडितका सवालमा सरकारले गरेको कामबारे छलफल गरेकी हुन् ।
महाकालीमा तुइनबाट खसेर किशोर बेपत्ता
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङस्थित गोठाल घाटमा तुइनबाट खसेर एक किशोर बेपत्ता भएका छन् । भारतबाट घर फर्कने बेला तुइन तरिरहेको अवस्थामा तुइन बाँधिएको (ठेसो) खम्बा टुटेर स्थानीय सचिन बुढाथोकी महाकाली नदीमा बेपत्ता हुन् ।
झुलाघाट नाका सञ्चालन
भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीस्थित झुलाघाट नाका सञ्चालनमा आएको छ । नाकाको महाकाली माथि रहेको झोलुङ्गे पुलको लक भाँचिएपछि मंगलबारबाट बन्द रहेको नाका बुधबार अपराह्नबाट सन्चालनमा आएको हो ।
धान भित्र्याउने र रोप्ने चटारो
कैलालीको भजनी नगरपालिका–२ मोहनपुरका छितरबहादुर चौधरीको परिवालाई धान भित्र्यााउने र रोपाइँ दुवैको चटारो छ । उनी चैते धान काटेर बर्खे रोपाई सुरु गर्न थालेका छन् । बर्खे मौसममा अधिकांश किसानले धान रोप्छन् । असोज–कात्तिकमा धानबाली भित्र्याउछन् ।
ढुंगाडमा सधैं सेतीको त्रास
वर्षायामको सुरुवातसँगै बैतडीको ढुंगाडवासीमा भने त्रास छाएको छ । सधैं दुःख दिने सेती नदीको त्रासमा सिगास गाउँपालिका—५ ढुंगाडवासीका रातदिन बित्ने गरेका छन् । गत वर्ष असोज ३१ देखि लगातार ४ दिन परेको अविरल वर्षाले ढुंगाड गाउँलाई सेती नदीले टापुमा परिणत गरिदिएको छ ।
३५० किलो झ्याउ बरामद
प्रहरीले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–३ गल्फास्थित सडक किनारमा बेवारिसे अवस्थामा प्रतिबन्धित जडीबुटी ‘झ्याउ’ बरामद गरेको छ ।
भारतीय सीमास्थित झुलाघाट पुलको लक भाँचियो
बैतडीको झुलाघाटस्थित नेपाल-भारत सीमा नाकामा जीर्ण रहेको पुलको लक टुटेपछि आवागमन रोकिएको छ । मंगलबार बिहान करिब ९ बजे पुलको भारततर्फको लक टुटेको सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् ।
बिहीबारबाट सञ्चालनमा आउँदै साझा यातायातका विद्युतीय बस
फेवाताल भूमाफिया र दलालको चंगुलमा पुग्यो : खिमलाल देवकोटा
अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै सिंहदरबारअगाडि प्रदर्शन
'सीसीटीभी फुटेज खै, राजीनामा कहिले ?'
'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संलग्नता छैन भने अर्थमन्त्री हटाउनुपर्छ'
हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक किन्ने (प्राप्ती गर्ने) भएको छ । दुबै बैंकको मर्जर कमिटीले यससम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । स्रोतका अनुसार दुबै बैंकको बोर्ड बैठक बसेर यसलाई पारित गरेपछि आगामी शुक्रबार प्राप्ती (एक्वीजिसन) सम्झौता हुने छ ।
बैंकलाई सीडी अनुपात घटाउने दबाब
एसियन प्यासिफिक र टिम किरण बास्केटबल फाइनलमा
एसियन प्यासिफिक र टिम किरण ऋत एसईई कप थ्री बाइ थ्री बास्केटबल प्रतियोगिताको गर्ल्सतर्फ फाइनलमा पुगेका छन् ।
पूर्वच्याम्पियन सिमोना हालेपले विश्व टेनिसमा आफ्नो पुनरागमन कायम राख्दै बुधबार अमेरिकाकी अमान्डा एनिसिमोभालाई हराइन् । यससँगै उनी विम्बल्डनको अन्तिम चारमा प्रवेश गरिन् ।
हल्का चिसो र पानी पर्नसक्ने सम्भावनाबीच पाँचौं तथा अन्तिम दिन । पुनर्जन्म पाएको इंग्ल्यान्डले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमै चौथो इनिङ्समा सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य पछ्याएर मंगलबार ऐतिहासिक जित निकालेको छ ।
रोयल सेन्ट्रल स्पोर्ट्सले राष्ट्रव्यापी खेलकुदअन्तर्गत प्रथम यू–२३ पुरुष बास्केटबलको उपाधि जितेको छ । कीर्तिपुरको नयाँबजारस्थित कभर्डहलमा मंगलबार फाइनलमा रोयलले टाइम्सलाई ६६–५७ ले पराजित गरी १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्यो ।
जर्मनीकी तात्जना मारियाले पछाडि परेको स्थिति उल्टाउँदै जुली निमिरलाई ४–६, ६–२, ७–५ ले हराएर पहिलोपल्ट ग्रान्ड स्लाम टेनिसको सेमिफाइनल स्थान बनाएकी छन् ।
बलिउडमा नातावाद रहिरहनेछ : राजकुमार राओ
अभिनेता राजकुमार राओ बलिउडको नातावादमाथि बोलिरहने कलाकारमध्येमा पर्छन् । हालै उनले 'इन्डिया टुडे'सँगको अन्तरवार्तामा पनि बलिउडमा नातावाद रहिरहने बताएका छन् ।
विद्यार्थी लक्षित गरेर 'जुभेनाइल'को प्रदर्शन
विवाद भएपछि मेयर बालेनले विजेता साइमनसँगै गएर बुझाए 'नेपहपको श्रीपेच'
'गोग्राह'मा नयाँ कथाहरू
'नेपहपको श्रीपेच' भाइबर साइमनलाई
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनप्रति भरोसा नभएको बताउँदै बेलायती अर्थ र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनप्रति भरोसा नभएको भन्दै दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।
खडेरीका कारण इटालीका ५ क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा
इटालीले ७० वर्षयता सबैभन्दा खराब खडेरीका कारण खाध्यान्न संकट पर्ने भन्दै पाँच उत्तरी क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गरेको छ । इटालीले इमिलिया रोमान्यिया, फ्रियुली भेनेजिया ग्युलिया, लोमबार्डी पिएदोमो र भेनेतो क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गरेको हो ।
युक्रेनमाथि आक्रमण नरोक्न पुटिनको आदेश
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्न आदेश दिएका छन् । युक्रेनी सहर लिसेचान्स्क कब्जा गरेपछि पुटिनले आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोक्न र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न आदेश दिएका हुन् ।
अमेरिकामा फेरि गोलीकाण्ड
अमेरिकामा स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित परेडका सहभागीमाथि गरिएको बन्दुक आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गएको छ । ३६ जना घाइते छन् । गोलीकाण्डमा घाइते भएकामध्ये २४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
मानेभन्ज्याङका अन्तिम मुखिया
कमलसिं राई गाउँका नामी डकर्मी हुन् । ५९ वर्षका भए । उनले बनाएका घरहरू गाउँभरि छन् । तर मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–५ उदैपुरका कमलसिंलाई गाउँमा अझै मुखिया भनेर चिन्छन् । उनी साबिक मानेभन्ज्याङ गाविस क्षेत्रका अन्तिम मुखिया हुन् ।
मानव बेचविखन आरोपमा ३ पक्राउ
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बर्दिया बढैयाताल–९ घरभई ललितपुरको गोदावरी–१० चापागाउँ बस्ने ४८ वर्षीय दौलत रोका, काठमाडौं महानगर–३२ पेप्सीकोलाकी २७ वर्षीया रेवती सुनार र रोल्पा त्रिवेणी–७ घरभई काठमाडौंको टोखा–२ चण्डेश्वरी बस्ने ५२ वर्षीय भरतमणि घर्तिमगर छन् ।
अश्लील शीर्षकसहितका भिडियो सम्प्रेषण गर्ने युट्युबर पक्राउ
गुजुल्टिएको गुन्द्रुक गाथा
एउटा पुरानो उखान छ, ‘गुन्द्रुकलाई पकाउनु पर्दैन, सालीलाई फकाउनु पर्दैन ।’ उखानको पछिल्लो पदांशले स्त्रीद्वेषी पुरानो पितृसत्ताको आत्मालाई संकेत गर्छ भनेर कसैले यसको उछित्तो काढ्यो भने त्यसको ...
घरबाटै काम गर्ने कि ?
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) चीनबाट सुरु भए पनि यसले पछिल्लो महिना विश्वभरका एक सय बढी देशलाई प्रभावित पारिसकेको छ । पछिल्लो सातामात्रै विश्व चर्चित कम्पनी गुगलले दक्षिण ...
हिउँद मासको बेला । जताततै हिउँ फुस्फुसाइरहेको थियो । हृदयपुर उपत्यकाका केटाकेटी स्कुल बिदामा रमाइरहेका थिए । कोही हिउँमा चिप्लेटी खेलिरहेका हुन्थे त कोही लुकामारी । कोहीचाहिँ हिउँलाई डल्लो पार्दै ...
Your browser is too old or not supported by eKantipur.